WMA in MP3 - Beddelaan WMA in MP3 la WMA in MP3 Converter
> Resource > Music > Beddelaan WMA in MP3 la WMA in MP3 Converter
WMA (Windows Media Audio) qaab, caadi ahaan loo isticmaalo ku saabsan adeegyada badan music download, waa la jaan qaada barnaamijyo badan oo Windows-ku salaysan, taas oo macnaheedu yahay, files WMA waa playable in Windows Media Player ama software kale Window. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jiro barnaamijyo multimedia badan iyo ciyaartoyda warbaahinta la qaadi karo oo ma taageeri qaab tan, waxaad tidhaahdaan, WMA. Noocaas ah ee xaaladda ay yihiin inta badan ka dhacay Mac OS. Sidaas darteed haddii aad leedahay wax badan oo WMA files audio oo aad rabto inaad iyaga ciyaaro MP3 ciyaartoyda la qaadi karo ama QuickTime u Mac Raaxo, waxaad kartaa in MP3 badalo WMA isbedel ah, sababta oo ah MP3 waxaa si balaadhan loo isticmaalo files audio ka mid yihiin music badbaadiyo, dhawaajiyaan iwm .
Si loogu badalo WMA in MP3 ee Mac ama Windows computer, heer sare ah oo aad talinayaa WMA ah in MP3 Converter caawimaad. Article waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo muujinaysa sida ay u badalaan WMA in MP3 isticmaalaya Wondershare aad Video Converter iyo Video Converter u Mac . Labadan barnaamijyadooda labada leeyihiin ultrafast xawaaraha diinta iyo ilaalin tayada video ah:
Qaadataa Halkan diinta wmv in MP3 in Windows la Video Converter tusaale ahaan. Haddii aad tahay dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad ku gaari kartaa si loogu badalo WMA in MP3 ee Mac (Snow Leopard, Mac OS X Libaaxa ka mid ah) si fudud tallaabooyinka la mid ah.
Sida loo Beddelaan WMA in MP3 in Windows
Download iyo rakibi Converter Video ah, kadibna waxaa ku.
Tallaabo 1: Ku dar files WMA in WMA in ay MP3 Converter
Talaabada 2: Habee saarka goobaha
Click icon qaab image si ay u doortaan "MP3" ka "Qaabka"> "Audio" sida qaab wax soo saarka iyo la qeexo goobaha faahfaahsan.
Tallaabo 3: Ka billow WMA in ay diinta ka MP3
Guji "Beddelaan" si ay u bilaabaan diinta aad WMA in MP3. Markaas waxaad riixi kartaa "Open Folder" in la furo gal meesha files wax soo saarka ayaa la badbaadiyey.
Tani ma ahan oo kaliya WMA ah in MP3 Video Converter , waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo kala duwan oo caan video iyo maqal ah qaabab si loo iyaga ciyaaro MP3 ciyaaryahan, iPod, iPhone, iPad iyo kombuyuutarrada gacanta ka badan.
Ma doonaysaa in loogu badalo WMA in MP3 Mac ? Markaas MP3 Converter aad kala soo bixi kartaa WMA ee Mac kor ku xusan oo samayn isku tallaabooyin sidii version Windows of Video Converter uusan: dari files si WMA Mac in ay MP3 app> dooran "MP3" sida qaab wax soo saarka hoos yaala qaybta Audio ah > guji "badalo" button. Waxaad ku baran kartaa info ee deatiled ee Guide User of Video Converter u Mac .